Talk:Madhibaan - Wikipedia
Madhibaan Madhibaan Tirada guud ee dadka 20,000 (1960 qiyaas) Meelaha ay ku badan yihiin
Diinta Sunni Islam, Suufi
Dadka ay dhalyo wadagaan Yibir, Muuse, Midgaan iyo beelo kale laga tiro badan yahay
Madhibaan (Af-Ingiriis: Madhiban) sidoo kale loo yaqaano Midgaan, waa beel ka mid ah qabiilada laga tirada badan yahay ee ka tirsan dadka Soomaalida, kuwaasi oo deegaan ku ah wadanka Soomaaliya iyo Itoobiya.
Qoraalka gudaha oo kooban [qari] 1	Hordhac 2	Taariikh waxay ka soo farcamen Maxamed Gorgate 3	Dadka Caanka ah 4	Sidoo kale fiiri 5	Tixraac Hordhac Beesha Madhibaan waxay ka tirsan tahay beelaha laga tirada badan yahay ee laga helo deegaano badan oo ka tirsan Geeska Afrika. Intaas waxaa dheer, beeshani waxay si rasmi ah u degaan dhamaan magaalooyinka Somaliland. Sidoo kale, magaalada Jigjiga iyo Diridhabe waxaa ku dhaqan tiro badan oo Madhibaan ah.
Magaca beeshu wuxuu ka yimid ereyga Madhibe (qof aan dhib lahayn), markii dambe loo bedelay Madhibaan.
Taariikh Tirokoob la sameeyay 1960kii waxaa lagu sheegay in beesha Madhibaan ahayd 20,000 qof, kuwaasi oo intooda ugu badan ku noolaayeen Waqooyiga Soomaaliya.
Waxay ahaayeen dad ugaadhsato ah, taasi oo keentay in laga sooco bulshada inteeda kale. Dadka Soomaalida ah inteeda u badan waxay ahaan jireen xoolodhaqato iyo beeroley; taasi oo keentay in si khaldan loo arko dadka ugaadhsatada noqday.
Si kastaba ha ahaatee, beesha Madhibaan iyo dhowr qabiil oo kale waxaa loo yaqaanaa Tumaal; taasi oo asal ahaan ka timid xirfada biraha ay beelahasi ku shaqaystaan.
Dadka Caanka ah Maryan Mursal Ciise, fanaanad ku heesta Af-Soomaaliga. Sidoo kale fiiri Beelaha Soomaalida Tixraac
sixid[wax ka badal xogta]
waxaan rabaa inaan kaa saxo walale madhiban kamui soo farcamin reerka aad soo qortey se lkn waxa ay ka soo farcameen Maxamed gorgate Hawiye dadkaasi aad so qortey maaha marka koley ma garan karo mesha aad tarikhda ka keentay lkn iska sax sida ugu dhaqsaha badan mahadsanid Mohamed143 143 (talk) 23:49, 21 Nofeembar 2016 (UTC)
== sidee u saxaa ==Mohamed143 143 (talk)
waxa aan rabo inan saxo magacyada aan saxayo sxage ban u maraa Mohamed143 143 (talk) 00:12, 22 Nofeembar 2016 (UTC)
Mohamed143 143 ma haysaa cadayn in beesha madhibaan ka soo tafiirantay Hawiye? Meeshan looma baahna muran iyo qajajac hadii aad heyso cadayn meeshan soo geli. Ismail4all (talk) 07
10, 26 Nofeembar 2016 (UTC)
waxan jeclan lahaa inad ka jawabto[wax ka badal xogta]
salan sare sxb waxan aad u jecelan lahaa inad ii sheegto maclumadka halka madhiban inu ka so farcamay reerka ?? hadad mala awaal ku qortayna aan ku caawino oo wax ka badal . Mohamed143 143 (talk) 08:11, 22 Nofeembar 2016 (UTC)
Sxb waan fahmey waxa aad sheegayso laakiin Cadayn iyo Xigasho ayaa loo baahan yahay. Hadii aad heyso cadayn qoraal ah oo xoojinaysa waxa aad sheegayso fadlan soo geli Boga wadahadalka maqaalka Madhibaan. Sidaan horay kuugu sheegay qabiilada Soomaalida qas iyo dhib badan ayaa ka taagan, markaa qofkii waxbedelaya waa inuu keenaa cadayn iyo tixraac. Anigu waxaan xigasho iyo tixraac ka keenay Halkan iyo en:Madhiban. Ugu dambayn, waxaad soo akhridaa BUUGAN oo si fiican uga waramaya qabiilada Soomaalida iyo tixraacooda. Mahadsanid, Ismail4all (talk) 07:11, 24 Diseembar 2016 (UTC)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Madhibaan&oldid=164699"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Diseembar 2016, marka ee eheed 07:11.